Shirweyne loogu wanqalay CAFIS oo lagu wado in uu ka furmo magaaladaa Turku ee Dalka Finland – Hornafrik Media Network
Shirweyne loogu wanqalay CAFIS oo lagu wado in uu ka furmo magaaladaa Turku ee Dalka Finland
By HornAfrik	 On Jun 28, 2017
Sirweyne loogu wan-qalay CAFIS ayaa wuxuu ka dhici doonaa 5-6 bisha Luulyo sanadkan 2017ka magaalada Turku ee Dalka Finland.
Shiweynahan oo nuuciisa oo kale aan horay loo qaban ayaa waxaa qaab olole ah u billaabay wariyeyaal Soomaaliyeed.oo dalka gudihiis dibad diisa ka hawlgala.
Shirkan ayaa waxaa isla abaabulay Guddiga Difaacayaasha Nabadda ee Finland (Rauhan Puolustajat) iyo saxafiyiin Soomaliyeed oo warbaahinta gudaha iyo dibaddaba ka howlgala.
‘Mar hadjii ay iska caddahay in warbaahintu tahay seef labo afle ah oo wanaag iyo xummaanba loo adeegsan karo annaguna aan bahda xirfadda warbaahinta ku abtirsanno ayaaan go’aansanay in aan adeegsanno warbaahinta si aan farriinta CAFIS u gaarsiinno Soomaalida” Sidaas waxaa Wali Xaashi oo ah wariye ka hawlgallada warbaahinta Dalka Finland, horjoogana u ah ololaha CAFIS oo ay weriyayaashu garyaheenka u yihiin.
Cabdiwali wuxuu dhanka kale sheegay in sababta shirkan CAFISka Soomaalida looga hadlayo looga billaabayo Finland ayaa sheegay in CAFISka Soomaalida dhexdeeda laga raadinayo yahay olole loo adeegsanayo Warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha oo dhan sidaas darteed loogu talo galay in fariintu gaarto gaarto Soomaalida oo idil.
Ololahan ayaa lagu doonayaa in dhaqanka Soomaalida lagu biiriyo Dhaqan Cafis ku saleysan oo aan shuruud laheyn, taasoo lagu qaban doono guud ahaan Soomaalida meel kasta oo ay joogto gudaha dalka iyo dibadda.
”Waxaan ku dadaali doonaa in meelkasta oo aan ololaha ku qabanno isugu keenno dad ama beelo dhibaato kala gaartay oo diyaar u ah in ay iscafiyaan wixii dhib kala gaarayna xalay dhalay ka noqdaa’ sidaas waxaa yiri Cabdi Muuse Maxamud oo kamid ah wariyaasha Ololahan Cafis unkamiddiisa qeyb ka ah.
‘Farriintan ayaa la gaarsiin doonaa Soomaalida meel walba ay joogaan iyadoo la adeegsanayo warbaahinta.
‘Tani waa noqon doonta bilow fiican oo sal u noqon kara dhaqan is cafis oo Soomaalida dhexdeeda ka bilowda.’ Cabdi Muuse ayaa intaas ku daray
Madaxwayne Farmaajo oo Xafiiskiisa ku qaabilay Madaxda Maxkamadda Ciidamadda Qalabka Sidda ee Somalia.
Xog: Taliyaha Booliska Somalia oo Xabsi Guri laga dhigay.